Al-Shabaab oo Lagu Eedeeyay Dilalka Loo Geysto Dadka Hormuudka u ah Bulshada Soomaaliyeed
Home Somali News Al-Shabaab oo Lagu Eedeeyay Dilalka Loo Geysto Dadka Hormuudka u ah Bulshada...
Maamulka dowlada Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa ku eedeyay AL-Shabaab in ay dilaan dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan kuwaasi oo maalmahii u danbeeyay dilal kala duwan ay ka dhacayeen deegaanada gobolka Gedo.
Cali bare Cabdi oo ah afhayeenka Ciidamada dowlada Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa sheegay mar uu saxaafada la hadlayay in shabaaku ay wadaan dilal qorsheysan ay ku laaynayaan dadka indhaha ama waxgalka u aha shacaka Soomaaliyeed ee dagaalada iyo abaaraha ay aafeeyeen,waxa uuna intaasi ku daray in ay gacan bir ah ay ku qaban doonaan kooxahaasi hubeysan.
Afhayeen ayaa hoosta ka xariiqay isagoo hadalkiisa sii wata in si aad ah au kaga xun yihiin dilalka kala duwan ee lagula kacayo shacabka soomaaliyeed iyo Mas’uuliyiinta kala duwan.
Wuxuu sheegay Cabdi Barre Cabdi in Al-Shabaab ay laynayaan dadka culumaa’udiinka iyo waxgaradka ah taasi oo aysan ogoleen in qof indhayar garad ah uuku sugnaadaan deeganada ay maamulaan Shabaab.
Sidoo kale Afhayeenka ayaa soo hadal qaaday hadal maalmahan danbe la isla dhexmarayay oo kku aadan in ciidamada dowlada Soomaaliya ee gobolka gedo ay dhinaato ku hayaan dadka shacabka ah ee halkaasi ku dhaqan,waxa uuna carabaabay in hadalkaasi uu yahay mid aan sal iyo baar toona aanu lahayn oo uu yahay mid been ah,
Cali bare Cabdi oo ah afhayeenka Ciidamada dowlada Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa saxaafada waxa uu ku qanciyay in ay tagaan gobolkaasi islamarkaana ay soo ogaadaan xalada dhabta ah ee ka jirta goboka Gedo oo dhibaato badan laga soo sheegayo.
Wuxuu sheegay in ciidamada Dowladda Soomaaliya haba yaraate aysan marnaba dhicin shacabka askarigii lagu arkana isaga oo dadka dhacaya in la tooganayo sida uu sheegay.
Hadalka maamulka gobolka Gedo ayaa imaanaya iyadoo mudooyinkii danbe ay ka jiraan Gedo dilal iyo falal amaandaro oo dadka lagu waxyeeleynayay.